Isra’eel Falasxiinonni Masjid Al Aqsaatti akka hin salaanne uggurte - NuuralHudaa
Poolisiin Isra’eel lammileen Falasxiin naannawa West Bank irraa gara magaalaa kabajamtuu Alqudsiitti seenaanii salaata jum’aa maasjid- al- Aqsaatti akka hin salaanne eegaa ugguree torban 5 lakkoofsisee jira.
Haaluma kanaan uggura kana daranuu kan cimse tahuu fi Jum’aa har’aa Waraanni Isra’eel seensa magaalaa Alqudsi irratti lammilee Falasxiin West Bank irraa tahan waraqaa eenyuummaa gaafachuun, gara magaalaattii akka hin seene dhorkaa ture jechuun jechuun Anaadoolu Niwwus gabaase.
Kanuuma hordofuun lammileen Falasxiin magaalaattii akka hin seene dhorkaman lakkoofsaan hedduu tahan kunniin, daandiiwwan naannawa magaalattiitti argaman guutuun kan salaatan tahuu gabaafame.
Lammileen Falasxiin magaalaa AlQudsi keessa jiraatan lakkoofsaan hedduu tahan immoo Masjid Al Aqsaatti argamun salaata jum’aa har’aa salaatanii jiru, Imaamni Masjid al Aqsaa Sheikh Yusuuf Abu Isneeyinaa Khuxbaa jum’aa hardhaa irratti, “ Masjid al Aqsaan kan muslimoota qofa, dhaamsa jeettu dabarse.
Mootummaan Isra’eel jiraatonni West Baankii fi magaalaa Gazzaa irraa tahan, magaalaa Al Qudsi seenuu fi akkasumas masjid Al Aqsaatti salaatuuf dirqama hayyama gaafachuu qabu jedha.
Nure hasan says:
dhugadha dirqama gaafachu qabu
kaaliid kaaliid says:
September 27, 2021 sa;aa 9:21 pm Update tahe